တရုတ်နဲ့ ကုလား ဘာကွာလဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သာသနာလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လုိုက်မယ်။ ဘုရားအလိုကျနေမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းရဲ့အနှစ်အသား ပျက် ? all that glitter like Thidagu may be NOT gold…
မောင်ရင်တို့ လူရမ်းကားစစ်အုပ်စု တစစီပြိုပျက်ကျသွား ချိန်ရောက်မှ လက်စားမချေရေးတွေ အာဃာတ မထားဖို့တွေ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးတွေ လာရွတ်မပြ နေနဲ့ »
တရုတ်နဲ့ ကုလား ဘာကွာလဲ
တရုတ်နဲ့ ကုလား ဘာကွာလဲ။
တရုတ်က မဏ္ဍပ်တုိုင် တက်မပြဘဲ ကုလားက ဘာကြောင့် မဏ္ဍပ်တိုင်တက်နေရတာလဲ။
ကျနော့ချစ်မိတ်ဆွေရင်းလည်းဖြစ်၊ ရဲဘော်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ကုိုသက်နိုင်က မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
သခင်ရှုမောင်(ဗုိုလ်နေဝင်း)လည်း တရုတ်နွယ်ဘွား ပါဘဲတဲ့။
(ကျနော်သိတာကတော့ အဖေတရုတ်၊ အမေတရုတ်၊ သူလည်း ၁၀၀% တရုတ်)
ဟုတ်ကဲ့ ကုိုသက်နုိုင်၊ တရုတ်ကြီး ဗုိုလ်နေဝင်း ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကုိုလည်း ကြည့်ပါအုံး။
သူက ကနောင်မင်းဆက်က ဆင်းသက်လာတဲ့ မြန်မာ့ဦးစွန်း၊ မြန်မာတွေ အကန်တော့ခံရတဲ့ မြန်မာမင်းမျိုးပါလုို့ သူ့လက်ရုံးတော်ကြီး ဦးချစ်လှိုင်ကုို ပြောခဲ့ကြောင်း ဦးချစ်လှိုင်က
မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ သမုိုင်းလိမ်က သမုိုင်းမှန်၊ မော်ကွန်းဝင် ချက်ချင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။
တရုတ်စစ်စစ် ဗုိုလ်အောင်ကြီး၊ ဗုိုလ်စန်းယုတုို့လည်း နတ်ရေကန်ထဲ ချလုိုက်သလုို ချက်ချင်းဗမာဖြစ်သွားကြတာဘဲ။
ဗုိုလ်နေဝင်းမင်းဆက်ကနေပြီး အခုဗုိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဗုိုလ်သိန်းစိန်တုို့ မင်းဆက်အထိ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ ဗုိုလ်ချုပ်တွေ၊ ဝန်ကြီးတွေ၊ အရာရှိ အရာခံတွေအားလုံးမှာ တရုတ်တွေနဲ့ တရုတ်နွယ်သူတွေအများကြီးက ရာထူးကြီးတွေယူ၊ တုိုင်းရင်းသား ဗမာတွေဖြစ်၊ အခွင့်အရေးတွေမှန်သမျှ အကုန်ရနေတော့ သူတုို့က ဘာအော်နေ၊ ဘာကန့်ကွက်နေ၊ ဘာဖင်ကြိမ်းစရာ ရှိမှာလဲ ကုိုသက်နုိုင်။
ဦးရာရှစ်လိုလူမျိးကုိုတောင် ဘင်္ဂါလီလုပ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
လွပ်လပ်ရေးဖခင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်ကုိုတောင် မွတ်စလင်ဖြစ်လုို့ အာဇာနည်ဗိမာန်က ရွှေ့ခုိုင်းနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
အစ္စလာမ်ဘာသာကုို ကုိုးကွယ်တာနဲ့ ဧည့်သည်၊ သံသယ၊ နုိုင်ငံခြားသားလုပ်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
တုိုင်းရင်းသားတစ်ယောက် အစ္စလာမ်သာသနာကို ပြောင်းလဲကုိုးကွယ်လုိုက်တာနဲ့ မှတ်ပုံတင်မှာ တုိုင်းရင်းသားစာရင်းက အပယ်ခံရတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ပြောင်းလဲကုိုးကွယ်လုိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်းဗမာဖြစ်ပြီး အခွင့်အလမ်းတွေ ဖွင့်ပေးတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ
ကုိုယ့်မွေးရပ်မြေ၊ ကိုယ့်နုိုင်ငံမှာ ကျောင်းကောင်းကောင်းလည်း မတက်ရ
စီးပွါးရေးမှာလည်း လက်ဝေခံအဆင့်က မတက်
ရှိရှိသမျှ အစုိုးရဌာနပေါင်းစုံမှာ အနှိမ်ခံရ
ကုိုယ့်သာသနာ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် မကုိုးကွယ်ရ
မချီးမြှောက်ရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ –
တရုတ်တွေလည်း ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ပြည်ပက ဝင်လာတယ်။
မြန်မာတုိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လက်ထပ်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကူးပြောင်းကုိုးကွယ်တယ်။ တုိုင်းရင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ၊ ဝန်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်။
မွတ်စလင်တွေလည်း ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ပြည်ပက ဝင်လာတယ်။
မြန်မာတုိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လက်ထပ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကုို ကူးပြောင်းမကုိုးကွယ်ဘူး။ နုိုင်ငံခြားသားသဖွယ် ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဝန်ကြီး၊ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ဖုို့ အသာထား စာရေးတောင် မခန့်တော့တဲ့အပြင် ခွေးနေရာ မရ ကန်ထုတ်ခံနေရတယ်။
နာလည်းနာ နံလည်းနံလုို့ အော်နေရတာပါ ချစ်မိတ်ဆွေကြီး ကုိုသက်နုိုင်
မခံမရပ်နုိုင်လောက်အောင် သားစဉ်မြေးဆက် တရစပ် ကုိုက်နေတဲ့ မြွေဆိုးကုိုလည်း မြင်အောင်ကြည့်ပါဗျာ။
(တုိုင်းချစ် ပြည်ချစ် မြန်မာတရုတ်များကုို မဆုိုလိုပါ။)
This entry was posted on February 1, 2015 at 3:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.